Adeegga VISA ugu Fiican iyo Bixiyaha | Hongyu
Nidaamka Falanqaynta Maqaarka VISIA® ee Jiilka 7aad wuxuu bixiyaa khibrad si weyn loo hagaajiyay oo loogu talagalay la -talinta bilicda iyo daryeelka maqaarka. Module qabasho oo cusub oo la naqshadeeyay ayaa si habsami leh ugu wareegsan mawduuca, si weynna u fududeynaya habka sawir -qaadista iyadoo siinaya macmiil raaxo weyn. Software -ka la cusbooneysiiyay wuxuu u oggolaanayaa sawir -qaadis dhakhso leh oo leh kala -soocida nooca maqaarka si otomaatig ah, ogaanshaha muuqaalka wejiga oo la safeeyey iyo in ka badan.
"Sii wad inaad noqoto alaab -qeybiyeha ugu horreeya adduunka ee nidaamyada sawirrada dhijitaalka ah, softiweerka sawir -qaadista, iyo adeegyada taageerada ee la xiriira si looga caawiyo xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka hagaajinta isgaarsiinta bukaanka iyo maareynta natiijooyinka daaweynta."
"Si loo bixiyo tayada ugu sarreysa, casriga ah, xalalka sawir-qaadista ee dhakhaatiirta iyo warshadaha daryeelka caafimaadka, oo ay taageerayaan adeegga macmiilka oo aan hore loo arag."
"Annaga oo ah hay'adda adeegyada qandaraaska ee ugu horreysa ee sawirrada caafimaadka, waxaan sii wadi doonnaa inaan dejino heerka dahabka ee dukumiintiyada iyo falanqaynta natiijooyinka caafimaad ee lagu go'aaminayo waxtarka daroogada iyo wax soo saarka bukaannada."
"Si loo bixiyo aaladaha sawir-qaadista iyo sawirrada, hababka, iyo adeegyada lagama maarmaanka u ah inay taageeraan hannaanka hal-abuurka waxsoosaarka ee warshadaha dawooyinka, bio-teknolojiyadda, iyo warshadaha aaladda caafimaadka ee deegaanka sharciyeynta maanta."
Cusboonaysiinta Macmiilka ee Wadda
Sida shirkad tiknoolajiyadeed, waxaan abuurnaa hantida tiknoolajiyadda hormuudka ah annaga oo iskaashanayna warshadaha, tacliinta, iyo xarumaha cilmi baarista si aan u xallino dhibaatooyinka adag.
Waxaan aaminsanahay iskaashi macmiil oo aan kala go 'lahayn oo nagu xira annagoo ah koox mideysan si aan iskaga kaashanno xalalka hal -abuurka ah si aan gacan uga geysanno kobcinta ganacsigaaga oo idinka duwo tartankaaga.
Waxaan qaadanaa koox-koox, hab-gacmeed si aan si degdeg ah u qorsheynno, tusaaleyno, u celcelinno, una gaarno natiijooyin horumar leh.
Nidaamka Sawirka Wajiga ee Cilmi -baarista Caafimaadka
Iyada oo leh waqtiyo qabasho deg-deg ah iyo qaabab iftiin oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo muuqaalka muuqaalada maqaarka, VISIA®-CR waa halbeegga sawirrada bukaan-socodka ee soo noqnoqda. Is -dhexgalka aan xadka lahayn ee VAESTRO® Qalabka Falanqaynta Sawirka wuxuu siiyaa xal falanqaynta maqaarka rogaal -celiye kasta.
1, booska gudaha iyo nalalka caadiga ah si loo hubiyo in xaaladaha sawir kasta uu yahay mid joogto ah oo lagu celin karo.
2, sawirro kala duwan oo muuqaal ah: adeegsiga iftiinka caadiga ah ee caadiga ah, tooshka iftiinka kala-soocidda iyo iftiinka ultraviolet ee sawirrada kala-duwan si loo cabbiro dusha maqaarka iyo xaaladaha subcutaneous.
3. Teknolojiyadda RBX Teknolojiyadda cusub ee RBX waxay bixisaa hab cusub oo aan caadi ahayn oo lagu ogaanayo, lagu eegayo laguna lafagurayo midabka subcutaneous iyo xididdada dhiigga.
Xooga saar bixinta xalalka mong pu ee 5 sano.